Weerarrada Al-Shabaab ee Kenya marka la barbar dhigo gobolka intiisa kale - BBC News Somali
Weerarrada Al-Shabaab ee Kenya marka la barbar dhigo gobolka intiisa kale
16 Jannaayo 2019
Image caption 14 qof ayaa lagu dilay weerarkan ugu dambeeyay ee laga fuliyay Nairobi
Dalalka ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya Sida Kenya, Itoobiya iyo Ugaandha ayaa si weyn uga feejigan iney weerarro kala kulmaan xarakada Al Shabaab ee ay kula daggaalamaan deegaanno ka tirsan Soomaaliya, iyadoo kooxdani ay horay wacad ugu martay iney fulineyso dhaqhaqaaqyo ay khal khal ku galineyso amniga waddamadaas.
Hase ahaatee Kenya ayey ka dhacaan weerarrada ugu badan ee ay Al Shabaab ka fuliso dalalka ku yaalla gobolka Geeska Afrika.
Ururka Alshaab oo Kenya ku dilay afar askari oo booliis ah
Haddaba, qormadan ayaan ku eegeynaa isbarbar dhigga dadaallada ay waddamada ku lugta leh howlgalka Amisom ugu jiraan iney ka feejignaadaan falcelinta Al Shabaab.
Lahaanshaha sawirka ESTV
Aminga Itoobiya inta badan waxaa suga hay'adaha aminga balse waxaa qeyb libaax ka qaata shacabka oo inta badan la socda dhaq-dhaqaaqa qof kasta oo isku daya in wax yeello uu u geeysto aminga dalka iyo dadkaba.
Marka laga soo tago hay'adaha aminga, Gobolka Soomaalida ee Itoobiya shacabka ayaa si iskood ah isku xilqaama oo qabta shaqooyiinkii booliska oo waxa ay xilliyada habeenkii ah baaritaan ku sameeyaan gawaarida iyo dadka ay ka shakiyaan.
Warbixin ku saabsan aminga magaalada jigjiga oo uu dhawaan wariyaha BBC-da ee magaalada Jigjiga ka soo sameeyay halkaas ayaa waxa uu ku wareeystay korneyl Cali Cabdijabaar oo muddo badan ahaa ku xigeenka taliyaha booliska ee dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxa uuna carrabka ku adkeeyay in mar kasta uu aaminsan yahay in aminga uu kujiro gacanta shacabka.
''Shacabka haddii ay amniga u istaagaan oo ay naftooda iyo hantidooda ilaashaadaan askariga waa ay u fududaaneeysa shaqadiisa'' ayuu yiri korneyl Cali.
isagoo hadalkiisa sii wata ayuu intaas ku daray: "Shacabka Soomaalida Itoobiyada waxa ay cashar ka barteen dhibaatada haysata walaahooda Soomliyeed marka sidaa darteed waxa ay go'aan ku gaareen in aysan dhibaatadaas soo gaarin gurigooda iyo in ay dalkoodabam sidaas awgeed mahan waxa ilaaliyay milatri ee iyaga ayaa amingooda sugtay''.
Amniga deegaanka Soomaalida waxaa sidoo kale ka qeyb qaatay culimada deegaanka oo inta badan ka wacyi galiya dhalinyarada in aysan ku biirin ururada Islaamiyiinta ah.
Dhanka kale, khudbadaha jimacaha ayay culimada diiradda ku saaraan wacyi galin ku aadaan arrimahaasi.
Wariyaheenna ayaa waxa uu sidoo kale wareystay faadumo Cabdi Iraad oo ka mid ah shacabka deggan magaalada Jigjiga waxa ayna sheegtay in aminga magaalada aysan udaba fadhinin ciidanka.
''Anaga shacabka ah ayaa aminga ilaashaana waxaan isugu xiranahay 50 qoys ilaa shan shan qoys, shantii guriba qofbaa mas'uul ka ah marka waxaan aad ula soconaa dha-dhaqaaqa xaafadaheenna''. Ayay tiri Faadumo.
Amniga Soomaaliland ayaa aad u wanaagsanaa tan iyo wixii ka dambeeyay qaraxyadii ka dhacay magaalada Hargeysa, 29-kii bishii Octobar ee sanadkii 2008-dii.
Daahir Rayaale Kaahin oo xilligaasi ahaa madaxweynaha Jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbanaanida ee Soomaaliland oo wareysi gaar ah siiyay BBC-da ayaa ka hadlay qaraxyadaasi, wuxuuna ku tilmaamay fal aad u xun, isagoona shacabka Soomaliland ugu baaqay in ay feejignaadaan oo ay iska soo dhex saaraan waxa uu ugu yeeray cadaw.
Tan iyo xilligaasi, ammaanka Somaliland ayay wax weyn iska baddeleen, iyadoo dadweynaha ay qeyb weyn ka qaataan feejignaanta laamaha ammaanka ee Hargeisa iyo magaalooyinka kale.
Bishii Luulyo ee sanadkii 2010-kii waxaa magaalada Kampala ka dhacay Qarax weyn oo ay ku naf waayeen in ka badan 70 ruux oo xilligaasi daawanayay cayaartii kama dambeysta ahayd ee Koobka Adduunka.
Haseyeeshee qaraxaasi ka dib Uganda wax qarax ah oo kale kama uusan dhicin, oo amingeeda aad ayaa loo adkeeyay.
Image caption Ciidamada Uganda ee ka tirsan Ammison
Inkastoo Uganda aysan daris la ahayn Soomaaliya hadana waxaa gudaha Soomaaliya ka hawl gala ciidamadooda oo ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta ee Ammison, sidoo kalena waxaa Uganda ku nool Soomaali badan, haddana waxaa la aaminsanyahay in ay ka amini wanaagsantahay Kenya.
Si kastaba ha ahaatee, madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa maanta ku gooddiyay in dowladdiisu aysan ka hari doonin kooxdii ku lugta lahayd weerarka, isagoo sheegay iney meel walba uga daba gali doonaan.